Walaaca iyo cabsida - Kala duwanaanshaha weyn | Bezzia
Susana godoy | 19/06/2022 18:00 | Cilmi-nafsiga
Inkasta oo xaaladaha qaarkood ay ku socdaan gacanta, taxane ah kala duwanaanshaha u dhexeeya walaaca iyo cabsida. Sababtoo ah labaduba isku mid ma aha oo waa waqtigii la bilaabi lahaa isfahamka goorta ay tahay in la kala saaro. Laakiin waxay u horseedi karaan jahawareer weyn ilaa inta ay ka walaacsan yihiin dareenka. Ma garanaysaa sida loo kala saaro?
Haddii aan ka fikirno, way adag tahay, haa. Sababtoo ah labada xaaladoodba in dareenka murugada uu ku jiri karo cabsi iyo walaac labadaba. Laakiin uma tixgelineyno inay yihiin falcelin isku mid ah, sababtoo ah waxaa jira tafaasiil badan oo kala saaraya. Haddaba, hoos ka ogow wax kasta oo aanu kuu hayno.
1 Dareenka kicinta walaaca iyo cabsida waa kala duwan yihiin
3 Odhaahda ku jirta mid kasta oo iyaga ka mid ah
4 Daqiiqada ay muuqato
5 sida loola dhaqmo
Dareenka kicinta walaaca iyo cabsida waa kala duwan yihiin
Taasi waa, marka aan dareemo walaac waxaan sameyn doonaa taas sababtoo ah xaalado aan shaqo ku lahayn cabsi. Markaa waxay ka dhacaan meelo kala duwan. Si loo caddeeyo bilowga hore, waa in sidaas la yiraahdaa cabsidu waxay soo ifbaxdaa maalinteena maalinba maalinta ka danbaysa markaasoo ay jirto khatar ay nolosheenu khatar wayn gali doonto. Haddii aad aragto shabeel ku soo ordaya, waxaad dareemi doontaa cabsi ama argagax laakiin ma dareemaysid welwel. Tan iyo markii aan u aragno inay tahay khatar, sida wax dhici kara laakiin aan weli dhicin, laakiin la sheegay in hanjabaaddu aysan wax khatar ah u keenin nolosha. Inkasta oo mararka qaarkood ay u ekaan karto sidaas, sababtoo ah waa run in welwelku nagu keeno calaamado isdaba-joog ah oo khatar noogu muuqda laakiin runtii ina ilaalinaya.
Hadda waxaynu ognahay in asalkoodu aanu isku mid ahayn, markaa falcelinta dareenkooda sidoo kale maaha.. Sababtoo ah markaan baqno, falcelinta falcelinta jidhku waa inuu cararo, qayliyo, marmarka qaarkood la dareemo, iwm. Laakiin walaaca leh, waa wax aan faa'iido lahayn in laga cararo haddii maskaxdeennu ay aaminsan tahay in ay jirto dhibaato halis ah. Haddaba, waa in aan raadinaa dhibkaas ka dhalanaya afkaar xun oo noqda mishiinka nolosheenna. Markaa, falcelintu gabi ahaanba way kala duwan tahay.
Odhaahda ku jirta mid kasta oo iyaga ka mid ah
Waxaa jira dad badan oo aan ka fogaan karin dareenka wejigooda marka ay wax dhibayaan ama marka ay jecel yihiin. Taasi waa in la yiraahdo dhaqdhaqaaqyada waxay ogaan doonaan haddii ay ku qanacsan yihiin iyo haddii kale. Haddaba, Haddii qof cabsado, aad baan u caddahay in ay ka muuqan doonto wejigooda. Sababtoo ah tibaaxuhu waa aasaas iyo sida, si fiican loo yaqaan. Waxaa la sheegay in ay tahay mid caalami ah sababtoo ah adduunka oo dhan qof kastaa wuxuu muujin doonaa muujinta iyada oo aan ka reebin. Laakiin marka ay jirto walaac, wax hadal ah lama xiriiro.
Daqiiqada ay muuqato
Marka aan ka baqno waa sababta oo ah waxay ku saabsan tahay falcelinta degdega ah ee hanjabaad naga haysata horteena. Laakin walwalku si lama filaan ah uma soo baxo sababtoo ah waxaan wajahaynaa khatar. Waxaa intaa dheer, waxaa la sheegaa in welwelku uu inta badan yimaado ka dib marka la soo ururiyo dhibaatooyinka ama dareenka. In kasta oo ay sidoo kale soo bixi doonto marka aan aad uga walaacno mustaqbalka iyo waxyaabaha aan weli dhicin. Haddaba, sida aan arki karno, daqiiqadaha uu mid ka mid ah dareenka muuqan karo iyo mid kale ayaa horeba u kala duwanaa.
sida loola dhaqmo
Daawaynta walaaca iyo cabsida sidoo kale way ka duwan tahay. Sababtoo ah marka laga hadlayo cabsida, waxaa la keeni karaa oo kaliya marka aan ka hadalno cabsida ka hortagaysa nolosheenna caadiga ah. Halka marka aan xusno walaaca, sida caadiga ah waxaad yeelan doontaa daaweyn maskaxeed iyo mid nafsi ah, halkaas oo Farsamooyin taxane ah ayaa la bixin doonaa si loo dhaqan geliyo oo la isku dayo in la xakameeyo dareenka iyo fikradahaas taasoo noloshaada ka dhigaysa mid aan macquul ahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Cilmi-nafsiga » Farqiga u dhexeeya walaaca iyo cabsida
Chickpeas xawaash leh oo ay ku jiraan baradho iyo digir